प्रदेश २ मा बाढीमा कहाँ के भयो, सरकारको के छ तयारी ? | सहारा टाइम्स
Home » main news » प्रदेश २ मा बाढीमा कहाँ के भयो, सरकारको के छ तयारी ?
प्रदेश २ मा बाढीमा कहाँ के भयो, सरकारको के छ तयारी ?
जनकपुर साउन ६ गते । प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा बाढीले क्षतिग्रस्तको अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यहाँका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बाढीले क्षति पुर्याउन शुरु गरेको छ ।
सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ५ का अधिकांश घर डुबानमा परेका छन् । त्यस्तै सप्तरीको कोशी, खाँडो, बलान, खडक, महुली, जिता, त्रियुगा नदीमा पानीको सतह लगातार बढ्दै गएको छ ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउपालिका–१, बरही वीरपुरमा घरहरु भत्किन थालेको छ । त्यस्तै महदेवा गाउँपालिका–१ स्थित चिम्टीमा पनि एउटा घर भत्केको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका–४ मा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको निर्माणाधीन पर्खाल भत्केको छ ।
त्यसैगरी मटिहानी नगरपालिका–२ स्थित सिर्सियामा पर्खाल भत्किँदा स्थानीय ६० वर्षीया सुशीला देवी राय घाइते भएकी छन् । उनलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा भर्ना गरिएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
जलेश्वर नगरपालिका–१२, थरुवाहीमा स्थानीय अजेश्वर मण्डलको खपडाले छाएको घर भत्किएको छ । सर्लाहीमा पनि बाढी तथा डुबानले क्षति गरेको छ । मलंगवा नगरपालिका–५ स्थित लखनदेही खोलाको बाढीले भाडसर गाउँका २७ घर डुबानमा परेको छ भने १४७ परिवारलाई अन्यत्र सारिएको छ ।
पानीको बहाव बढेसँगै सप्तकोशी ब्यारेजका ५६ मध्ये ४४ वटा ढोका खोलिएको कोशी ब्यारेजका असई कुलबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
कोशीको बाढीबाट अति नै प्रभावित हुने सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरुसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार बिहानको मापनअनुसार कोशी ब्यारेज भएर ३ लाख २७ हजार ८ सय ८० क्युसेक पानी बहाव बढेको छ । कोशी नदीमा आउने बाढीका कारण हरेक वर्ष सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका निकै प्रभावित हुने गर्दछ ।
प्रदेश सरकारको तािरी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बाढीबाट नागरिकलाई जोगाउन आफूहरू तम्तयार अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभयो ।
गत वर्ष प्रदेश नम्बर २ मा बाढीले ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो । मानवीय क्षति नहोस् भनेर यसपटक सावधानी अपनाइएको र पूर्वतयारी पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्रयोग हुने सम्पूर्ण उपकरण सुरक्षा निकायलाई जिम्मा लगाएका छौं ।’
बाढीको कारण हुनसक्ने सम्पूर्ण जोखिमको अध्ययन गरिएको र बाढीबाट प्रभावित हुनसक्ने नागरिकबारे जानकारी संकलन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट सुरक्षा निकायलाई बाढीबारे निगरानी गर्न ड्रोन क्यामेरा सहित मोटर तथा रबर बोट १५ थान, लाइफ ज्याकेट, नाइलन डोरीलगायतका आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
त्यस्तै रौतहटको गौर, ईशनाथ, राजपुर, परोहा, चन्द्रनगर, बाराको कलैया, फेटा, सुवर्ण र पर्साको पर्सागढी, जगनाथपुर, बहादुरमाई गाउँपालिका बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । यो वर्षपनि स्वाभाविक रुपमा यही ठाउँ बढी जोखिममा रहेका छन् ।